Adora & etc.: May 2013
"ဖြူ ဘာတွေတွေး နေပြန်တာလဲ"
၂နှစ်သာ ရှိသေးသော သားလက်ကိုဆွဲခါ လမ်းလျှောက်ရာမှ ပြန်လာသော မောင်က မေးသည်။ မောင့်လက်ထဲမှာလဲ စာအုပ်တချို့နှင့်။
ဒါအိမ်ရှေ့ စာကြည့်တိုက်က ယူလာတာပဲဖြစ်ရမယ်.. ဒီနေ့မနက်ကမှ ထည့်ထားတာကို ဟု ဖြူစိတ်ထဲကတွေးရင်း မနေနိုင်စွာ
"မောင် ဘာလို့စာအုပ်တွေ ထုတ်လာပြန် တာလဲ.. မနက်က အသစ်လဲ ထားပြီးသား"
"မဟုတ်ပါဘူးကွာ၊ ဟိုလမ်းထိပ်က အိမ်က ဂစ်တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နိုင်ငံခြား မဂ္ဂဇင်းတွေ တွေ့လို့ မောင်ယူလာတာ... နော်ကွာ ပြောလိုက်စမ်း မေမေ့ကို"
ဖြူတို့ရပ်ကွက်ထဲတွင် အိမ်တိုင်းလိုလို ခြံရှေ့တွင် စာကြည့်တိုက် အသေးစားလေးတွေ ရှိကြသည်။ စာအုပ်များများ မဟုတ်.. ၁၀၊၁၅အုပ်သာ ဆံ့သော စင်အသေးစားလေးများဖြစ်သည်။ တချို့က သစ်တို၊သစ်စ နှင့် ဆောက်သည်၊ တချို့က အုတ် နှင့်.. အဓိက က မိုးလေ လုံဖို့ အမိုးကလေးပါဖို့ ဖြစ်သည်။ အိမ်တွင် အဆင်သင့်ရှိသော၊ အိမ်နီးနားချင်းများနှင့် မျှဝေလိုသော၊ လဲလှယ်ဖတ်ရှုလိုသော စာအုပ်များကို စာကြည့်တိုက်ထဲ ထည့်ကြသည်။ အခမဲ့ ယူဖတ်နိုင်ကြသည်။ဖတ်ပီးရင် တရိုတသေ သူ့နေရာသူပြန်သွားထားကြသည်။
ဤဓလေ့ကို ဘယ်သူကစသည် မသိ။ ဖြူတို့ ဒီရပ်ကွက်ကလေးကို ပြောင်းလာ ကတည်းက ရှိနှင့်နေပြီး ဖြစ်သည်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း တွေ့ရခဲသော၊ ချစ်စရာကောင်းသော စိတ်ကူးကို သဘောကြကာ မောင်က လက်သမားဆရာခေါ်၍ အမိုးအကာနှင့် စာအုပ်ဗုံးကလေး ဆောက်ခဲ့သည်။ လက်သမားဆရာကြီးက ကျွန်းသားကလေးဖြင့် စာအုပ် ၁၀အုပ်ခန့် ဆံ့သော စာကြည့်တိုက်အသေးစားလေးကို မှန်ချက်တံခါးလေးနှင့် ဆေးအပြာလေးသုတ်ပေးခဲ့သည်။ အဝေးကကြည့်ရင် ငှက်အိမ်ကလေးနဲ့ပင် တူသေးသည်။ စာကြည့်တိုက်လေးပြီး ပြီးခြင်း ပထမဆုံးအလုပ်က ဆေးဖြူနှင့် စာရေးခြင်းပင်.. "Takeabook, Leaveabook please"
စာဖတ်ဝါသနာပါသော ဖြူတို့အတွက် အိမ်တွင်စာအုပ်မရှား၊ မောင်က သတင်းနှင့်သုတစာအုပ်များ စိတ်ဝင်စားသည်။ ဖြူက မိန်းမပီပီ အလှအပ ဖက်ရှင်၊ ရသစာအုပ်များကို နှစ်သက်သည်။ နှစ်ယောက်စလုံးကြိုက်သော သီချင်း၊ ဂီတမဂ္ဂဇင်းတွေလဲ ရှိသည်။ အစပိုင်းမှာတော့ မောင်နဲ့ဖြူ ဘာစာအုပ်ထည့်မလဲ စဉ်းစားရင်း အငြင်းပွါးရသေးသည်။ ကိုယ်ထည့်သည့် စာအုပ်လေးများကို အိမ်နီးနားချင်းများ မနှစ်သက်မှာ စိုးသလို၊ ငါကြိုက်တဲ့စာအုပ်လေး ပျောက်သွားရင် ဆိုသည့် စိုးရိမ်စိတ်လဲရှိသေးသည်။ နောက်ဆုံး ကောင်းနိုးရာရာ စာအုပ်ရွေးထည့်ရင်း ခုတို့ ကိုယ်ကြိုက်သည့်စာအုပ် ကိုယ့်ဘာသာ သွားထည့်ရင်း၊ သူများ ဝေမျှထားသည့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာအုပ်လေးများငှါးဖတ်ရင်း အသားကြနေပြီ။ တခါတရံ အပျက်အစီးရှိတတ်ပေမဲ့ သည်စာအုပ်စင်ကလေးကြောင့် တအိမ်နဲ့တအိမ် ပိုရင်းနီးပြီး တယောက်အကြောင်း၊ တယောက်ဝါသနာ တယောက်သိကာ မိတ်ဆွေတိုးသည်မို့ အကျိုးကျေးဇူး များလှသည်။ ဖြူတို့ရဲ့ အခမဲ့ စာကြည့်တိုက်ကလေးကို ပထမဆုံးစာအုပ်လာယူသည့် ဘေးအိမ်က အလယ်တန်းကျောင်းသူလေးကို ချောင်းကြည့်ရင်း ပီတိဖြစ်ရသည့် အကြောင်းကို တော့ မောင်နဲ့ဖြူ ဘယ်တော့မှ မေ့မည်မထင်။
"ခြံထဲ လမ်းလျှောက်ရအောင် သဲ"
အားကစားလုပ်ရမှာ ပျင်းသော ဖြူ့ကိုမောင်က အမြဲကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစား လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းလေ့ရှိပါသည်။ ဖြူချူချာတာ ဒါ့ကြောင့် ဟုလဲ မကြာခဏ ဆူတတ်သေးသည်။ ဖြူ မငြင်းနိုင်အောင် သဲ ဟူ၍လဲ ကြင်ကြင်နာနာခေါ်တတ်ပါသေးသည်။ မောင်စိတ်မတိုခင် သားလက်ကိုဆွဲပြီး မောင့်လက်ကိုတွဲခါ ခြံထဲလမ်းဆင်းလျှောက်ကြသည်။ သားနှင့်ဆော့ရင်း ညောင်းလာရင်တော့ သားအမိ၊သားအဖ ၃ယောက် ခြံဘေးက မြက်ခင်းစပ် ကားပျက်ကြီးနား ခြေပြစ်လက်ပြစ် ထိုင်ခါ နားလို့ရသည်။
သူငယ်ချင်း တယောက်ကသူတို့စက်ရုံတွင် သုံးသော အိုးမော်ဒယ် မြန်မာအခေါ် ပေါင်မုန့်ကား၊ သိုးစောင်းလို LiteAce Van အမျိုးအစား ကားကိုဈေးပေါပေါဖြစ်ထုတ်လိုသည် ဆို၍မောင့်ကို အတင်းဝယ်ခိုင်းခဲ့သည်။ မွေးနေ့လက်ဆောင်ကဒ်လေး ၃၊၄ခုလုပ်ဖူးရုံ၊ အိမ်ဆောက်တုံးက ဟိုဆေးဟိုနေရာသုတ်၊ ဒီပစ္စည်းဒီမှာထား ဟုနှမ်းဖြူးဖူးရုံနှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အနုပညာ မျက်စိရှိသည်၊ စိတ်ကူးကောင်းသည် ဟု ဘဝင်မြင့်နေသောဖြူသည် နိုင်ငံခြားမှာလို ကားထဲတွင် အိမ်ခန်းလေးတခန်း ပြင်ကြည့်လိုသည်။ မောင်ခရီးဝေးဝေးလံလံ ထွက်ဖို့မအားသော နွေရာသီရက်များတွင် ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ထားသော သည်နေရာလေးတွင် မိသားစုလာနားနိုင်ကြသည်။
တကယ်လုပ်ကြည့်တော့ပြောသလောက်မလွယ်ရေးချမလွယ်။ မလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်၊ ရောင်းတန်တာရောင်း၊ လိုတဲ့ ပစ္စည်းတွေလိုက်ရှာ၊ ပစ္စည်းကြိုက်တော့ ငွေကမလိုက်နိုင်နှင့် ခုထိအပြီးမသတ်သေး။ အလျင်လဲ မလို၍ ဖြေးဖြေးခြင်းပဲလုပ်မည်။ မောင့်အမ မိသားစု တနေ့ အိမ်လာလည်တုံး ဆယ်ကျော်သက် တူမလေးက မြက်ခင်းစပ်သွားထိုင်မယ် မပြောဘဲ ကားပျက်ကြီးနား ထိုင်မယ်ဆိုသဖြင့် ဖြူ့စိတ်ကူးအိမ်လှလှလေး အမျိုးတွေကြား နာမည်ဆိုးတွင်သွားတော့သည်။ ဘာမှသေသေချာချာ မပြီးသေးသည့်အပြင် အမြဲတမ်း အိမ်ဘေးတွင်ရပ်ထားသည်မို့ ကားစုတ်ကြီးနှင့်တူသေးတာပင်။ "နေနှင့်အုံး၊ အားလုံးပြီးမှ အမျိုးတွေကို ခေါ်ကြွားလိုက်မည်" ဟုဖြူ့စိတ်ထဲက ပြောမိသည်။ ဘယ်တော့လဲဆိုရင် တော့ "ဘုရားကို မေးပေါ့"
ကားကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ဖြူထည့်ချင်တာတွေအကုန်ဝင်ဖို့ တကယ်တော့မလွယ်။ပစ္စည်းတမျိုးကို အမျိုးမျိုးအသုံးပြုနိုင်တာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုသည်။ ဥပမာ ထိုင်လဲထိုင်၊အိပ်လို့လဲ ရသည့် ဆိုဖာ လိုမျိုး။ စားပွဲခုံပုပုလေးလဲ လိုသည်။ တီဗီလေး၊ music player လေးလဲထားမည်။ ဂီတာလေး တလက်လောက် ထားဖို့ နေရာလေးလဲ ရှိရမည်။ ပြီးတော့ ဘေစင်၊ မီးဖို နဲ့ရေခဲသတ္တာ။
မောင်က မီးဖိုကြီး မထည့်ချင်ပေ။ အနားယူနေတုန်း ဗိုက်ဆာလို့မှ အိမ်ဘက်ကိုပြေးပြီးပြန်ယူရမယ်ဆိုရင် မနိပ်သေးပါဘူး" ဟု ဖြူပြန်ဂျီကြမည်ကို သိသဖြင့် ငြိမ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
"ငါ့မိန်းမကလည်း ခဏနားပြီး လမ်းပြန်လျှောက်မယ် မရှိဘူး။ တယောက်ထဲငြိမ်ပြီး ပြုံးလိုက်၊ မဲ့လိုက်၊ ရီလိုက် နဲ့ဘာတွေများ ဒီလောက်တွေးနေတာလဲဟင်။ ဟိုမှာ အန်တီတောင် ညနေစာပြင်နေပြီ။ သွားကြရအောင်လေ။"
မောင်ပြောမှ အိမ်ဘက်ကို ကြည့်မိတော့ မေမေနှင့် အိမ်အကူအမကို မီးဖိုစောင်တွင် လှမ်းမြင်နေရသည်။ ဖြူတို့အိမ်က L ပုံစံ တထပ်ခွဲ တိုက်ပုလေးမို့ ဖြူထိုင်နေသည့် နေရာကဆိုရင် အိမ်ဘေးတခြမ်းလုံးကို မြင်နေရသည်။ သည်အိမ်ကလေးက ဖြူတို့မိသားစု ကြိုးစားပမ်းစား တည်ဆောက်ထားတာမှို့ ငွေကြေးအရ အမြတ်မကြီးရင်တောင် ဖြူ့အတွက်တန်ဖိုးကြီးလှသည်။ ဖေဖေရော မေမေနှင့် ဖြူပါ ခြံကျယ်ကျယ်ကလေးနှင့် အိမ်ကလေးတလုံးပိုင်ဖို့ အတော် ကြိုးစားခဲ့ရသည်။ တော်ပါပြီလေ။ ဒီအကြောင်တွေ တွေးရင် မောင်ပြောသလို ပြုံးလိုက်၊မဲ့လိုက် နှင့် မိုးစုန်းစုန်းချုပ်တော့မည်။
မောင်နဲ့သားလေးက ဖြူ့အရှေ့ကပြောပြောဆိုဆို လျှောက်နှင့်ကြပြီ။ မေမေနဲ့ ဖြူ စိုက်ထားသော Kiss Me ပန်းများ နှင့် နှင်းစီ အိုးများဘေးကဆင်ဝင်ဝတောင် ရောက်လုပြီ။ သားကခလေးပီပီ ပန်းတွေဆွဲချ ခြင်သည်ကို မောင်ကကောက်ချီကာ ထိန်းလိုက်ရသည်။ ဖြူနဲ့ မေမေက မိန်းကလေးပီပီ ဆူးများသောပန်းကိုမှ ကြိုက်တတ်သည်လေ။
မောင်တို့ကိုကြည့်ရင်း ဖြူအိမ်ဘက်သို့ လှမ်းလာသည်။ တကယ်တော့ ဖြူဘာမှမလိုချင်တော့ပါ။ ဖြူ့ဘဝတွင် မေနဲ့ဖေရှိသည်။ ဖြူ့ကိုယ်ပိုင် ချစ်စရာမိသားစုလေးလဲရှိသေးသည်။ ပြီးတော့ဖြူချစ်သည့် ဖြူတို့အိမ်လေး။
ဖြူသည် ဒီဘဝကို အလွန်မက်မောလှပါသည်။
May 27/2013 - 5pm
Posted by Adora etc. at 09:09 No comments: